Coming Soon | သင်ကာဘုန်းမြင့်-Thinker Bhone Myint
← Interview with an eleven years old Cyclone Nargis survivor of Burma
သရော်စာ Satire နဲ့ ဟာသအမည်း Black Humor →
June 10, 2008 · 8:25 am
မကြာမီ ပြန်လည် ထုတ်ဝေပါမည်။ နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းဖြစ်ပြီးနောက် အယ်ဒီတာအဖွဲ့ရော၊ ပါဝင်ကူညီသူများပါ မဂ္ဂဇင်းအလုပ်တွေ ပစ်ချပြီး၊ အလှူခံရေး၊ ကူညီရေး အပြင် ကိုယ်တိုင် သွားရောက်နိုင်သူက သွားရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ လုပ်လက်စ အရှိန်လေးရလာတော့ မဂ္ဂဇင်းကို ပြန်ကောက်ကိုင်ပြီး မူလစီစဉ်ထားသည့် ဖောင်များမှ နာဂစ်အတွက် အသစ်တိုးသင့်သည်များကိုတိုး၊ ရွှေ့ဆိုင်းသင့်သည်များကို ရွှေ့ဆိုင်းကြရပါသည်။ အတော်အတန်ပြီးမြောက်နေပြီဖြစ်၍ မကြာမီ ထွက်နိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
မကြာမီလာမည်ဆိုလို. မျှော်လင်.လျှက်ပါ ဖွဲ.တည်ရာ…
ဟိဟိ ကိုကေဂျွန်နောက်ကနေ စာထပ်ချိုးလိုက်မယ်…..
မကြာမီလာမည်ဆိုလို့ မျှော်လင့်လျှက်ပါ ဖွဲ့တည်ရာ….
မျှော်ကာ မောရ ကြာမြင့်လှချင့် ရွှေဟသာင်္ ..
I visting your home. so good.how r u? i’m not fine.